Vaovao - Rahoviana no miova ny clutch manual? Tokony hifantoka amin'ireo fisehoan-javatra telo ireo isika
Varingarina & Clutch Cylinder
Rahoviana no miova ny famandrihana tanana? Tokony hifantoka amin'ireo fisehoan-javatra telo ireo isika
Ny takelaka fampitana ny fifindran'ny tanana dia an'ny zavatra azo ampiasaina. Amin'ny fampiasana fiara dia hitafy kely ny takelaka fametahana. Rehefa tonga amin'ny diplaoma iray ny akanjo dia mila soloina. Ahoana no ahafantarantsika fa tokony ovaina ny takelaka misy azy? Araka ny zavatra niainana taloha, heveriko fa ireo toe-javatra manaraka ireto dia manondro indrindra fa tokony hovaina ny takelaka fametahana.
1. Mavesatra ny pedal clutch ary tsy miharihary ny fahatsapana ny fisarahana
Raha hitanao fa mavesatra noho ny teo aloha ilay pedal clutch, ary azonao atao ny manamarina fa tsy misy olana amin'ny fandefasana azy avy eo amin'ny pedal clutch mankany amin'ny clutch, dia azo inoana fa manify kokoa ilay takelaka misy azy.
Satria mifono eo anelanelan'ny manidina sy ny lovia faneriterena ny takelaka fametahana, rehefa matevina dia matevina ny takelaka fametahana dia tohanan'ny takelaka fametahana ny lozisialy, ary ny lohataona fikosoham-bary amin'ny faran'ny iray hafa dia hohamafisina mankany amin'ny anatiny. Amin'izao fotoana izao, dia mora be ny mitondra ny lohataona fanaovana lovia amin'ny alàlan'ny fanitsana ilay izy. Ankoatr'izay, ny pedal dia maivana sy mavesatra, ary misy fanoherana kely amin'ny fotoana fisarahana, raha maivana kosa ny pedal alohan'ny fisarahana sy aorian'ny fisarahana.
Rehefa mihamalemy ny takelaka fametahana dia hiroso mankany anaty ny lozan'ny fikororohana, ka mitongilana ivelany ny lozisin'ny fikosoham-bary. Amin'izany fomba izany, rehefa manitsaka ny fihazonana izy, ny lohataona diaphragm dia mila atosika hifindra lavitra kokoa, ary ny herin'ny lohataona diaphragm dia tsy ampy hampiakarana ny takelaka fanerena amin'ny famindrana voalohany. Rehefa tsindriana kely fotsiny ny lohataona fikosoham-bilia, dia azo sarahina ny lovia faneriterena. Ka amin'izao fotoana izao dia ho mavesatra be ilay pedal clutch, ary manjavozavo ny fahatsapana ny fotoana fisarahana, saika tsy hita intsony.
Raha mitranga io trangan-javatra io, aorian'ny fanesorana antony hafa dia azo tsaraina fa manify kokoa ny takelaka fametahana, saingy tsy mila soloina amin'izao fotoana izao, satria mahia fotsiny izy io ary tsy misy akony amin'ny asa mahazatra. Raha tsy tsapanao fa mavesatra loatra ny pedal ary tsy te-hanitsaka azy ianao dia azonao atao ny mieritreritra ny hanolo azy raha tsy izany dia tsy ho olana mandritra ny fotoana hafa izany.
2. Ny clutch dia miala amin'ny dingana kely
Izany hoe, avo kokoa ny teboka mitambatra. Satria mifono eo anelanelan'ny flywheel sy ny lozan'ny tsindry ny takelaka mitazona, ny herin'ny lohataona eo amin'ny lovia fanamafisam-peo dia manosika ny lozisin'ny lozisin'ny tsindry hanindry mafy ilay takelaka misy eo amin'ilay flywheel. Ny matevina ny takelaka fametahana dia ny lehibe kokoa ny fahasimban'ny lovia faneriterena lovia lozisialy, ary ny habetsaky ny herin'ny clamping. Ny manify ny takelaka fametahana dia ny kely kokoa ny fiovan'ny lohataona fikolokoloana ary ny kely kokoa amin'ny herin'ny clamping. Ka rehefa manify amin'ny lafiny iray ilay takelaka fametahana dia nivelatra ny hery fametahana ilay takelaka fanerena. Raha tsindrio kely ilay pedal clutch dia hisaraka ilay clutch.
Ka rehefa hitanao fa saika malalaka hatramin'ny farany ilay pedal clutch rehefa manomboka ianao dia tsy hihetsika ny fiara, na hisaraka ny clutch rehefa manitsaka kely ilay pedal clutch ianao, izay ny ankamaroany dia noho ny fiakanjony be loatra. lovia. Amin'izao fotoana izao dia tokony hosoloina faran'izay haingana ny takelaka fametahana, satria amin'izao fotoana izao dia efa tena manify ny takelaka fametahana. Raha mitohy ny famongorana azy dia ho potika ny rivet raikitra amin'ny takelaka misy azy ary ho simba ny takelaka fanerena.
3. Mikorisa ny Clutch
Tsy mila mampiditra an'ity aho. Manify loatra ilay takelaka fametahana. Ny takelaka faneriterena sy ny flywheel dia tsy afaka mamindra herinaratra aminy ara-dalàna. Aza misalasala amin'izao fotoana izao, ovao haingana araka izay azo atao. Satria tsy vitan'ny hoe hanimba ny lozanao tsindry io, fa mandrahona mafy koa ny fiarovana ny fiara. Alao an-tsaina hoe vonona ny hisongona ianao eny an-dalana, menaka mavesatra iray nidina, nidina ilay gadona, nibitsibitsika ny hafainganam-pandehan'ny motera, ary tsy nihetsika ilay mpandeha hafainganana, mahatsiravina izany.
Tsy dia miharihary ny zava-bitan'ny slip clutch tany am-boalohany, ary zara raha tsapa izany rehefa mitondra fiara ambany. Tsy azo tsapain-tanana ihany izany rehefa mitondra fiara amin'ny alàlan'ny fitaovana avo lenta ary manitsaka ilay mpandeha haingana. Satria ny clutch dia tsy mila mamindra torque be loatra rehefa mitondra fiara ambany, ary lehibe kokoa ny enta-mavesatra rehefa mitondra fiara avo, ka mora kokoa ny misolelaka.
Fotoana fandefasana: Jan-18-2021
Adiresy: Room 1901, Culture Culture iray, No.1349 Liyuan North Road, Haishu, District, Ningbo, Zhejiang, China